HomeDASTUURKA FEDERAALKA SOOMAALIYA PDF
Author: Faukazahn Mogrel
Dastuurka kumeel gaarka ah. Madaxweynuhu wuxuu iscasilaadiisa u gudbinayaa Golaha Shacbiga isagoo sii marsiinaya Afhayeenka Golaha Shacbiga. Soomaaliya Waxay leedahay Baasaboor Elektaroonik ah inkastoo kaydka macluumaadka ama Serverka kaydiya Macluumaadka uu yaalo Imaaraatka Carabta Wali Awood uma helin laanta Socdaalka in ay usoo wareejiso Soomaaliya.
Ciidanka soomaaliya waxaa la sameeyay kii, waa markii ay soomalaiya xornimadeeda ka qaadatay gumeeysta-yaashii Ingriiska iyo Talyaaniga. Qodobka 98aad-Xil-ka-qaadista Madaxweynaha 1 Madaxweynaha Jamhuuriyadda waxaa xilka looga qaadi karaa oo keliya marka uu ku xadgudbo dastuurka, ku tagri-falo awooda xafiiska ama uu galo khiyaamo qaran.
Hase yeeshee waxa ay xaaladda cirka isku sii shareertay kadib markii madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf uu sheegay in dowladda federaalka ay diyaaradii uu la socday “ku xayirtay magaalada Hargaysa”. Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska.
Imaaraadka oo rajo xumo ka muujiyay xal u helidda khilaafka Khaliijka. Waxaa sidoo kale lagu soo dhaweyn karaa in jiritaano kale lagu soo dhaweeyo in ay ku soo biiraan Federaalka, waa hadii ay doonayaan.
Cutubka 1aad – Baaqa Jamhuuriyadda. Soomaaliya malahan Ciidan habaysan kaas oo awooda hanashada amaanka Dalka iyo Xuduudihiisa, waloow ay dhisanyihiin ciidan gaaraya ugu yaraan 50, hadana waa ciidamo beeleedyo la isu-keenay. Cutubka 4aad Waajibaadka Jamhuuriga ah.
Marka waa in ay noola dhaqanto qaab dowladeed, ee aysan noola dhaqmin sida qabaa’il iska firirsan oo aan dowlad dhexe lahayn”, ayuu dastuuria xildhibaan Zakariye oo BBC-da la hadlay. Cutubka 9aad Laanta Fulinta ee Federaalka.
Cutubka 3aad Xuquuqda Aas-aasiga ah.
Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay haynayaan xafiiska ugu badnaan labo fedraalka oo midkiiba uu yahay 5 sano.
Sidoo kale waa in lagu sameeyo asaaska ah ‘ ka qeybgalka buuxa ee dadka’ Qodobkaiyo la tashiga. Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska 2 Madaxweynuhu marka uu dhisayo Golaha Wasiirrada waa in uu tixgeliyaa qaybaha ay ka kooban tahay bulshada Soomaaliyeed.
Badmareenka Soomaalida Ciidanka Xoogga. Ma jiro wax bixin ama tilaabo la qaadayo hadii wax u dhacaan sida sidaan caksiga ku ah ma jiraan wax tilaabo ah oo dowlad soomwaliya qaadi karto markii dowlada federaalka ahi dabacsan tahay ama u dhaqmeyso si lidi ku ah dastuurka.
Dood kaddib haddii hindisaha sharciyeed ay oggolaadaan saddex dalool laba dalool federaalkw Golaha Shacbigu, waa in hindisaha sharci loo gudbiyaa Aqalka Wakiilada dowlad-goboleeddada. Xisbiyada siyaasadda Xiriirka Dibadda Baasaboor. Waxaa xusid mudan in mooshinka ay hormuud ka soomaaaliya xildhibaano horey dowladda ugu eedeeyey in ay Itoobiya ku wareejisay muwaadin Soomaaliyeed, arrintaas oo markii dambe loo saaray guddi soo baara.
Haddi kale waqtigaas waxaa loo tixgelinayaa in uusan aheyn muddo xileed marka la fiiriyo u jeedooyinka qodobka ee muddo xileedka Madaxweynaha.
Soomaaliya Waxay leedahay laba xarun ee warfaafineed ee ku hadla Afka Dawladda Radio Muqdisho ito Telefishinka Qaranka Soomaaliyeedwaxaa kaloo jira Saxaafad madax badaan oo badankood ku hadla Afka Beelahood. Cutubka 15aad Sugidda Nabadda iyo Ammaanka Qaranka.
Eeg Shuruudaha adeegsiga ee faahfaahinta. Maamul goboleedka Galmudug ayaa noqday midka saamaynta ugu xun uu murankan ku yeeshay kadib markii madaxdii sarsare ee maamulkaasi ay ku kala qaybsameen moowqifka khaliijka. Dowladda Imaaraatka Carabta ayaa la sheegaa in Soomaaliya ay saldhigyo ku leedahay iyo in maamul goboleedyada Soomaaliya u gacan dhaafeyso dowladda sokmaaliya, sida ay xildhinaabada Soomaaliya ku eedeeyeen.
Xildhibaanada mooshinka gudbiyay waxay safiirka UAE ku eedeeyeen inuu dawladda u gacan dhaafayo arrimaha maamul goboleedyada. Muxuu Khilaafka Khaliijka u gilgiley nidaamka federaalka Soomaaliya? Dawladda Wali mayeelan Dastuur dadku ansixiyeen kaas oo ka turjumaya Soomaaliya oo dhan waloow uu jiro mid kumeel gaar ah oo lagu magacaabo Dastuurka federaalka ku-meel-gaara ah Dastuurka iyo Federaalaynta.
Inkasta oo laga yaabo in markii horeba xiriirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar uu ahaa mid ul booc ah ku kutubayay, haddana murankan ka dhashay arrimaha khaliijka ayaa u muuqda in uu wax wayn u dhimayo rajo kasta oo laga qabay in xaaladda soo hagaagto. Qodobadaan waa kuwa ka mid ah Tixda: Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa. Golaha wasiirada Soomaaliya oo ka shiray Khilaafka Khaliijka.
Qoralka waa la heli karaa sida uu qabo Ruqasadda Commons ee hindisidda ee marka loo eego la midka ; waxaa soo hoos gali kara qodobo kale. Murankii ka dhashay moowqifka dowladda federaalka ay ka qaadatay khilaafka dowladaha khaliijka iyo kan ay ka qaateen dowlad goboleedyada Soomaaliya ayaa cirka isku sii shareeraya, markastana waxaa kasoo kordhaya wax cusub oo arrimaha sii murjinaya.
Lahaanshaha sawirka Madaxtooyada Soomaaliya Image caption Madaxweynaha Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qaybgalaya caleemo-saarka madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf Murankii ka dhashay moowqifka dowladda federaalka ay ka qaadatay khilaafka dowladaha khaliijka iyo kan ay ka qaateen dowlad goboleedyada Soomaaliya ayaa cirka isku sii shareeraya, markastana waxaa kasoo kordhaya wax cusub oo arrimaha sii murjinaya. Isfaham darada mararka qaar soo kala dhexgasha dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waa mid aad u qoto dheer oo soo jiitamayay muddo dheer.
Marar badan oo hore maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in xiriirka ay u jartay dowladda dhexe.